DF oo Muqdisho ku xirtay Guddoomiyaashii Gedo iyo Baardheere ee Jubbaland – Hornafrik Media Network
DF oo Muqdisho ku xirtay Guddoomiyaashii Gedo iyo Baardheere ee Jubbaland
DHACDOOYINKASomali NewsWARARKA MAANTA
By Liibaan Nuur	 On Feb 6, 2020
Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ku xirtay guddoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Gedo Sheekh Maxamed Xuseen Al-Qaadi iyo guddoomiyaha degmada Baardheere Ismaaciil Qorrax.
Xog aan ka helnay qaabka Muqdisho lagu keenay masuuliyiintaas ayaa waxa ay sheegeysaa, in Taliyaha qeybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka ay u dirtay dowladda federaalka, kaas oo ku qanciyey in ay u soo raacaan Muqdisho, kadib markii sida la sheegay uu balan qaadyo u samyeey.
Markii ay kasoo degeen garoonka Aadan-Cadde ayaa waxaa la wareegay ciidan ka tirsan booliska Soomaaliya, kuwaas oo xabsiga u taxaabay.
Al-Qaadi iyo Ismaaciil Qorrax ayaa ahaa labada nin oo kaliya ee ku sugan gobolka Gedo, kuwaas oo siyaasad ahaa hoos tegayey maamulka Jubbaland, kadib markii ay dowladda federaalka ku biireen dhamaan guddoomiyaashii iyo mas’uuliyiintii kale ee Jubbaland ugu magacaawnaa gobolka Gedo.
Sababta Taliyaha qeybta 43-aad ee xooga dalka loogu diray mas’uuliyiintaan si uu u keeno Muqdisho ayaa ah in ay ka tirsanyihiin ciidanka xoogga dalka, isla markaana ay isaga hoos tegayeen.
Gabi ahaanba gobolka Gedo oo ka mid ah gobollada uu ka arrimin jiray maamulka Jubbaland ayaa gacanta u galay dowladda federaalka, kadib markii ay ku daadisay ciidamo ay diyaarado uga daabushay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka.
Shir ay maanta magaalada Kismaayo ku yeesheen golaha wasiirada Jubbaland ayaa looga hadlay ciidamada ay dowladda federaalka toddobaadyadii dhowaa ku daabuleysay, isla markaana qabsaday inta badan gobolka Gedo.
Qoraal kasoo baxay golaha wasiirada Jubbaland ayaa lagu sheegay in dowladda dhexe ay “faro-gelin qaawan” ku hayso dowlad goboleedka Jubbaland ayna “weerar qaawan kusoo qaaday” gobolka Gedo.
Sida lagu sheegay qoraalka, golaha wasiirada Jubbaland ayaa go’aan ku gaaray inay heegan buuxa geliyaan ciidamada kala duwan ee dowlad goboleedka Jubbaland, si looga hortago, baa la yiri “weerarada qaawan ee ay dowladda federaalku kusoo qaaday Jubbaland.”
“Goluhu waxay caddeynayaan in cawaaqib xumada ka timaada dagaalka qaawan ay masuul ka tahay dowladda federaalka Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraalka, oo lagu faafiyey warbaahinta maamulka Jubbaland.
Jubbaland oo soo bandhigtay Ugaas ka soo goostay Al-Shabaab